Edemede site na Jenn Lisak Golding
Nsogbu azụmaahịa ahụ ma ọ bụ ebumnuche arụmọrụ nke na-agwụ gị ike n'oge na-adịbeghị anya? Ohere inweta bụ ihe ngwọta ya na teknụzụ. Dị ka chọrọ na oge gị, mmefu ego na mmekọrịta azụmahịa na-arị elu, naanị ohere ị ga-anọ n'ihu ndị asọmpi na-enweghị uche gị bụ site na akpaaka. Mgbanwe na omume onye na-azụ ihe na-achọ akpaaka already maraworị na akpaaka bụ ihe na-enweghị isi n'ihe gbasara arụmọrụ: obere njehie, ụgwọ, igbu oge, na ọrụ aka. Dị nnọọ ka ọ dị mkpa, ọ bụ ihe ndị ahịa na-atụ anya ugbu a.
Ka a na-ebipụta blọọgụ na ebe nrụọrụ weebụ kwa ụbọchị, otu ihe na-echekarị bụ izu ohi nke onyonyo ị zụtara ma ọ bụ mepụta maka onwe gị ma ọ bụ ọrụ aka gị. TinEye, ihe nchighari onyonyo onyonyo, na-enye ndi oru ikike ichota url obula maka onyonyo, ebe inwere ike ihu ugboro ole achoputara onyonyo webu na ebe eji ha. Ọ bụrụ na ị zụrụ onyonyo ngwaahịa sitere na isi mmalite dịka nke anyị
Wednesday, December 7, 2016 Tọzdee, Septemba 24, 2020 Jenn Lisak Golding
'Oge a bụ oge ezumike ahịa, yana nkwenye nkwenye email anyị na-akwado nkwado neverBounce mepụtara ezumike ezumike email kachasị ezumike maka nlele ị na-ele. Nchịkọta National Retail Federation na-aga n'ihu na-egosi na mmefu na-arị elu n'afọ a, ọkachasị n'ịntanetị ma na-agba mbọ site na mgbalị dijitalụ. Ahịa email na-arụ ọrụ dị ukwuu, na ndị na-ere ahịa kwesịrị ịnọ n'elu na-edebe aha ha dị ọcha ma dị ọhụrụ iji kpuchido aha onye zitere ha na nnyefe ha. Fọdụ